★ Ukukhuthazwa ★
Uhlu Oluphezulu Lokushintshana
Izinsizakalo Zokuhwebelana Kwe-Crypto
I-Smart Contract Audit
I-Ethereum Based ICOs
I-Binance Smart Chain Based ICOs
Yazi Ikhasimende Lakho (KYC)
IKai Ken inu yindawo eqhutshwa umphakathi, ithokheni leDeFi. Ekuhwebeni ngakunye, kwenzeka imisebenzi emithathu elula: Ukushisa, Ukutholwa kwe-LP, nokukhula kwentuthuko. Ngale modeli yamathokheni, iphrojekthi izuzwa ngokuphelele ngakho konke okwenziwayo okukodwa. Ukuthengiselana kukaKai ken kuzuzisa BONKE abaphethe.
I-Kaiken Inu Token
Le thokheni ihlose ukuklomelisa abanikazi bayo bese ijezisa abathengisi. Kukho konke okwenziwayo, kusetshenziswa izintela ezilandelayo:
Lapho umtshalizimali ethenga ithokheni ngesikhathi Sokuthengiswa Komphakathi:
I-1% iya esikhwameni sokumaketha
1% iya ku-LP
1% uya ukushisa ikheli le-wallet
2% iya kubanikazi
Lapho umtshalizimali ethengisa ithokheni ngesikhathi Sokuthengisa Komphakathi:
2% - 7% iya kubanikazi ngokuya nge-Eth elingana nokuthengisa okuphelele umthengisi azokwenza. Inkontileka izonquma i-Eth efanayo futhi isuse i-% eya kubanikazi.
I-2% - 7% eya kubanikazi kukho konke ukuthengiselana kokuthengisa isici okungekho muntu osisebenzisile. Lesi sici sehlukile futhi siqala ukubonakala kuleli phawu.
Izici nezibuyekezo ezizayo:
Ipulazi lezinja. Lokhu kuzoba yichibi lokulima le-LP. I-Kaiken INU ingahlanganiswa ne-Eth, i-USDT nezinye izinhlamvu zemali ezizinzile ukulima i-Kaiken INU eningi. IKaiken INU izophinde ibambisane namanye amathokheni okulandela.
Indlu Yenja. I-Dog House izoba ngesinye isibonakaliso esilinganiselwe sokuthi lapho kuhlanganiswa noKaiken Inu ePulazini lezinja, kuzophinda kabili amandla okugcona.
Imidlwane ye-Crypto. Lokhu kuzoba ngesinye isibonakaliso esingatholwa ngokulandela i-Kaiken INU ngokunye namanye amathokheni. Le midlwane ye-crypto ingaba ama-NFTs angathengiswa
Ukudla Kwezinja. Lokhu kuzothengwa ukondla ama-Crypto Puppies ukuze akhule ngokushesha.
Amavithamini ezinja. Lokhu kuzoba esinye isibonakaliso esizonikeza ukudla okunomsoco emidlwane ye-crypto.
Uhlelo lokusebenza lwe-KAI Eco. Lokhu kuzoba uhlelo lokusebenza olusemthethweni lweselula lwephrojekthi ye-Kaiken Inu.
Ukuthengiswa Kwangasese ku- $ 7 ngethokheni eliyibhiliyoni elilodwa.
Ukuthengiswa kwangaphambili ku- $ 10 ngethokheni elilodwa lesigidigidi nge-dxsale.
Ukuthengiswa Komphakathi ku- $ 12 ngethokheni elingu-1 billion
% Ukusabalalisa. Lokhu kusebenza kuphela ngesikhathi sokuthengisa esidlangalaleni, hhayi ukuthengisa kwangaphambi kokuthengisa noma kwangasese.
Inhloso yethu ukuthola uKishu noShib Inu ngokuya ngabanikazi kanye nemakethe. Senza izinyathelo ezincane.
2021 Q3 1. Ukususwa kokuqala
• Ukudalwa Kwewebhusayithi
• Ukuthunyelwa Kwenkontileka
• Ukudalwa kwe-Akhawunti Yezokuxhumana
• Ukuthengiswa Kwangasese
• Ukuthengiswa kwangaphambi komphakathi
• Isicelo se-CG
• Isicelo se-CMC
• Ukuthuthukiswa kweKai Eco Wallet
I-CEX (Ukufakwa kuhlu okungu-1-3)
• Ukuthuthukiswa kwePulazi lezinja
2021 Q4 2. Ukushunqa
• Ukuthunyelwa Kwamapulazi Enja
Uhlu lwe-CEX (uhlu olu-1-2)
• Ukumaketha Kothonya Abezindaba Zomphakathi
• Ukuthunyelwa Kwendlu Yezinja
• Vuselela i-Kai Eco Wallet
2022 Q1 3. Ukukhula
• Ukuthuthukiswa Kwemidlwane Yama-Crypto
• Ukuthuthukiswa kwamavithamini ezinja
• Ukuthuthukiswa Kokudla Kwezinja
Ukufakwa kuhlu kwe-CEX (1 kwe-Top 5)
• Buyekeza i-Kai Wallet
2022 Q2 4. Ukuhlanganisa
Beka zonke izingcezu ezindaweni zazo ezifanele bese uqala ukwakha i-KAI Ecosystem.
Ukuthengiswa Kwangasese kwe-ICO
Ufuna ukufaka ku-ICO yakho?
Faka kuhlu i-ICO yakho namuhla kuwebhusayithi yethu futhi sifinyelela izinkulungwane zabatshalizimali abavela kuwo wonke umhlaba futhi futhi, manje sinikeza okushesha kakhulu Insiza ye-KYC ye-ICO. Gcwalisa ifomu lethu lokuxhumana namuhla futhi sizokuthinta emahoreni angama-24 alandelayo.
I-imeyili Yokusekela Okujwayelekile:
I-imeyili Yohlu lwe-ICO:
Ukusekela ingxoxo yocingo:
Sicela ushiye le nkambu kungenalutho
Kuhle! Hlola ibhokisi lakho lokungenayo ukuze uqinisekise ukubhalisa kwakho.
ICO Listing Online yisilinganiso esizimele se-ICO nesikhulumi sohlu nomphakathi we-blockchain onabasebenzisi abakhulayo nsuku zonke.
Zizwe Ukhululekile ukuxhumana nathi ngengxoxo ebukhoma noma ngetelegram uma ufuna ukufaka kuhlu i-ICO yakho noma udinga Izinsizakalo Zokukhuthaza ze-ICO.
Copyright © 2022 Ukufakwa Kuhlu Kwe-ICO Ku-inthanethi. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Udinga ukukhuthazwa kwe-Ico?
Hlola amasevisi wethu